Ampianaro ny alika hitodika | Tontolo alika
Ny fampiofanana ny alikanao hianatra zavatra dia fahaizana mahafinaritra mahafehy fotsiny. Izy io koa dia fampiofanana azo ianarana haingana ao anatin'ny fotoana fohy ary mety ho zavatra mivoatra sy mihatsara rehefa mandeha ny fotoana.
Azonao atao ampianaro hitodika ny alikanao ankavanana, havia na roa ary ataovy milamina, amin'ny fanarahana fotsiny ireo dingana tsotra ireo.
1 Ahoana ny fomba hampianarana ny alikanao hitodika mora foana?
2 Ampianaro ny alikao hitodika avy any ankavanana miankavia
3 Torohevitra ho an'ireo alika tsy te hihodina
3.1 Ataovy miadana
4 Ampianaro ny alikanao amin'ny endrika boribory
5 Atombohy miadana ary mihatsara tsikelikely
Ahoana ny fomba hampianarana ny alikanao hitodika mora foana?
Voalohany, alao antoka fa mijoro ny alika anao na angataho izy hijoro raha fantany ny baiko. Mitazona fitsaboana doggie eo ambonin'ilay vavony fotsiny ary manomboka mihetsika tsimoramora ny tananao, manorata faribolana lehibe iray izay avy eo amin'ny orony mankany amin'ny rambony, ary manohy mampianatra azy ireo ny fitsaboana.
Satria hanaraka ny tananao ny vavam-alikanao ary noho izany dia tsy maintsy mitarika azy ho azy mihodina ary mamorona faribolana. Aza adino ny maka mora azy ity mba tsy ho diso fanantenana ianao na ilay alika rehefa mihodina.
Raha vantany vao vita ny alikanao, omeo ny alikanao ny fankasitrahana ary arahabao izy milaza zavatra, toy ny "alika tsara ianao", "zazalahy hendry", sns.
Avereno imaso imbetsaka ireto dingana voalohany ireto, omeo valisoa foana ny alikao rehefa nandalo ilay làlana izy, satria tsy adala ireo ary raha tsy mahazo tambiny izy ireo dia tsy te hanao tetika. Manaova fanazaran-tena amin'ny fomba mahazatra.
Raha vantany vao voafehin'ny alikao io fihodinana io dia asio baiko toy ny "fihodinana", ka avereno isaky ny manao ny anjarany ny alikanao ary raha vantany vao nahavita imbetsaka ianao dia azonao esorina ilay fitsaboana ary ny tananao ihany no ampiasaina, miaraka amin'ny ny baiko «mihodina». Raha vao mihaino anao ny alikao, aza adino ny miarahaba azy ary manome azy mofomamy alika matsiro.
Ampianaro ny alikao hitodika avy any ankavanana miankavia
Vantany vao voafehin'ny alikao ny anjarany dia vonona ny handeha amin'ny ambaratonga manaraka ianao, noho izany amin'ity indray mitoraka ity dia hampianarinao izy hivily miankavanana miankavia.
Atombohy amin'ny fametrahana zava-mahadomelina eo alohan'ny vavan'ny alikao. Amin'ity indray mitoraka ity raha tokony hampiasa ny baiko "avadika" dia andramo ny miteny hoe "mihodina ankavanana" na "mihodina miankavia." Omeo ny baiko ary avy eo tariho ny alikao amin'ny làlana tianao alehany, amin'ny fampiasana ny fitsaboana hitarihana azy.
Ampiharo amin'ny andaniny roa, imbetsaka isan'andro ary mandra-piavin'ny alikao.
Rehefa mihatsara ny hafetsen'ny alikao, andramo ny hitarika azy irery amin'ny baiko sy amin'ny fihetsiky ny tanana. Vidio fotsiny izy amin'ny faran'ny fihodinana ary raha tsy mampiasa ny lalana marina izy.
Torohevitra ho an'ireo alika tsy te hihodina
Ny fihodinana dia mety ho baiko sarotra apetraka amin'ny voalohany, koa araraoty ny fotoana ary mahareta amin'izany. Manaova fotoana fohy isan'andro, raha tokony hiofana mandritra ny ora maro.
Ampianaro ny alikanao amin'ny endrika boribory
Ny alika sasany dia ho sahirana amin'ny fifehezana ny kanton'ny boribory lavorary, koa ampiasao bauble ho tariho ny vavam-alikanao ary hivadika amin'ny làlana tsara. Raha vantany vao mahitsy ilay izy, dia fantatrao, valoy izy.
Aza manandrana manao boribory iray manontolo hatramin'ny voalohany, mandehana tsikelikely. Izany dia hanampy anao hanao sary ny faribolana lavorary sy avelao ny alikao hahatakatra izay antenainao aminy.
Atombohy miadana ary mihatsara tsikelikely
Raha tsy afaka mianatra mihodina ny alikanao dia miverena amin'ny fiofanana fototra ary mandrosoa miadana sy amin'ny hafainganao. Tsy mitovy ny alika rehetra ary mila fotoana bebe kokoa na kely kokoa ny fampandrosoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ampianaro hiverina ny alikanao
Alika madio sy alika mongel: ahoana no tsy itovizany?